Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha ao Burkina Faso : Nofinofin’ny mpanohitra eto Madagasikara
Raharaha ao Burkina Faso : Nofinofin’ny mpanohitra eto Madagasikara
Tao anatin’ny roa taona monja dia firenena afrikanina miisa telo izay samy zanatany frantsay teo aloha no nisehoan’ny fanonganam-panjakana dia i Mali, Guinée-Conakry ary i Burkina Faso vao tamin’ny alatsinainy teo. Mitovy avokoa ny zava-nitranga tao amin’ireo firenena telo ireo satria nahongan’ny miaramila ny filoha voafidim-bahoaka, nampiatoana ny lalàmpanorenana ary noravana daholo ny andri-panjakana rehetra.
Amin’ny ankapobeany dia ny tsy fahombiazan’ny mpitondra eo amin’ny fitantanana ny firenena no tena anton’ny fanonganam-panjakana tany Mali sy Burkina Faso. Ho an’i Guinée kosa somary miavaka kely satria ny fanovana lalàmpanorenana mba afahan’ny filoha teo aloha Alpha Condé milatsaka ho fidiana fanintelony no tena fositra. Maro amin’ireo mpanaraka ny vaovao eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena moa no mametra-panontaniana hoe “firenena iza indray no hitrangan’ny fanonganam-panjakana manaraka aty Afrika ? ”. Ho an’ny mpanohitra eto amintsika sy ireo tsy mankasitraka ny fitondrana mijoro ankehitriny dia nofinofin’izy ireo mihintsy raha i Madagasikara no firenena manaraka hisehoan’izany, araka ny resaka ataon’izy ireo any anaty tambazotran-tserasera sôsialy.
Deraina sy dokadokafana ny tafika any amin’ireo firenena telo ireo, lazaina fa tena tia tanindrazana fa tsy tahaka ny miaramila malagasy izay tsy manao afa-tsy ny miaro ny tombotsoan’ny mpitondra. Ho an’ny mpanohitra sy ny mpomba azy mantsy dia ny fialàn’ny filoha am-perinasa no tena zava-dehibe indrindra ka na korontana tsy hifankahitana aza no hahatongavana amin’izany dia tsy olana mihintsy. Fantatr’ireo mpanohitra tsara fa sarotra na tsy ho vita mihintsy ny hanongana ny fitondrana raha hitarika olona eny an-dalambe ka ny miaramila sisa no andrandrain’izy ireo mafy mba hanaisotra ny filoham-pirenena amin’ny toerany ary handray ny fahefana.